Laboratory Girazi Condenser, Boat Ceramic, Simbi Billet nembato - Huida
bvisa hombe / diki beaker 600ml 150ml 2000ml pyr ...
Yakajeka uye amber giredhi A Volumetric Flask Na ...
Yancheng Huida Glass Instrument Co., Ltd. ndiye mugadziri ane ruzivo, anonyanya kugadzira marabhoritari egirazi uye mamwe marabhoritari. Bhendi re "YCHD" rinovira girazi dzakateedzana uye volumetric yekuyera zviridzwa zvinozivikanwa pasi rese.
Huya udzidze nezve mitsipa mitatu chinu wi ...
Huya udzidze nezve mitsipa mitatu chinu neni Nhatu-yemuromo chirongo chinhu chakajairika chemakemikari girazi chiridzwa, icho chinoshandiswa zvakanyanya mu organic chemistry kuyedza. Iyo nhatu-mutsipa guchu kazhinji ine t ...
Gamuchirai vese vatengi vakanaka kutaurirana nezve ...
Gamuchirai vese vakanaka vatengi tauriranai mhinduro dzemhinduro uye Kuyera Pipette mazano nesu !! Hazvina mhosva mutengi mutsva kana mutana mutengi, Tinotenda mune refu chirevo uye hukama hwakavimbika ...
Kuziva kupatsanura guchu, utili ...
Kuziva kwekupatsanurwa kweflask, kushandiswa, nzira yekushandisa uye zvinhu zvinoda kutariswa One. chinzvimbo chinoshandiswa chinowanzoshandiswa chinu chine chakakomberedza pasi chinu, sandara pazasi chinu uye distillation fl ...
Zvakanakira kupatsanura fanera Mabhenefiti: Izvo zvinoitika nekumira kwemhinduro zvinogona kudzorwa. Kuparadzanisa fanera rudzi rwegirazi rekuyedza ngarava, kunyanya inoenderana neyeparati ...
Kuongororwa kwemhedzisiro yeCOVID-19 pane iyo ...
Borosil Glass Inoshanda Ltd., Corning Inc. uye DWK Hupenyu Sayenzi GmbH ichave vatambi vakuru muirabhoritari yegirazi uye musika wepurasitiki kubva muna 2021 kusvika muna 2025 Rabhoritari glassware uye plasticw ...